Ruuxa Qudduuska ah Hal Qof, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Aabbuhu waa Ilaah, wiilkuna waa Ilaah, oo Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah, laakiin waxaa jira Ilaah keliya. Sug wax yar, dadka qaar baa leh. «Hal lagu daray hal lagu daray hal mid oo mid ah? Taasi run ma noqon karto. Kaliya ma shaqeynayso. »
Xaq, ma shaqeyso - mana aha sidoo kale. Ilaah ma aha wax "wax" lagu daro. Waxaa jiri kara oo keliya qof awooda leh, oo caqli badan, oo jooga - markaa waxaa jiraya hal Ilaah oo keliya. Adduunyada Ruuxa, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah waxay ku midoobeen qaab walxaha aan awoodu u ahaan karin. Xisaabteenu waxay ku saleysan tahay agab; had iyo jeer kama shaqeeyaan xadka, cabbirka ruuxiga ah.
Aabbuhu waa Ilaah, wiilkuna waa Ilaah, laakiin waxaa jira Ilaah keliya. Kani maahan qoys ama guddi ilaahnimadiisa - koox ma dhihi karto: "Ma jiro mid aniga oo kale ah" (Ishacyaah 43,10; 44,6; 45,5). Ilaah waa uun inuu yahay rabbaani - in ka badan qof, laakiin waa Ilaah kaliya. Masiixiyiintii hore wax fikir ah kama aysan helin jaahilnimada ama falsafada - waxay si caadi ah ugu qasbeen inay sidaas sameeyaan Qorniinka.
Sida Qorniinku u dhigayo in Masiixu uu yahay rabbaani, waxay baraysaa in Ruuxa Quduuska ahi uu yahay mid rabaani ah. Wax alla wixii Ruuxa Quduuska ahi sameeyo, Eebbe wuu sameeyaa. Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah, sidoo kale wiilka iyo aabaha - sedex qof oo sifiican ugu mideysan hal Ilaah: Saddexanka.
Su'aasha salaadda Masiixa
Su’aasha ayaa badiyaa la isweydiiyaa: Maaddaama Ilaahay mid yahay (mid) muxuu Ciise ugu kalifay inuu Aabbaha baryo? Su'aashan gadaashiisa waxay u maleynaysaa in midnimada Eebbe yahay Ciise (kii ahaa Ilaah) uma oggolaanin inuu aabaha la tukado. Ilaah waa mid. Haddaba yuu Ciise u duceeyay? Sawirkani wuxuu dayacayaa afar qodob oo muhiim ah oo ay tahay inaan caddeynno haddii aan rabno inaan helno jawaab ku habboon su'aasha. Qodobka ugu horeeya ayaa ah in odhaahda “Ereygu wuxuu ahaa Ilaah” ma uusan xaqiijinin inuu Ilaah kaliya ahaa Logos [Ereyga]. Ereyga "Ilaah" ee muujinta "iyo Ilaah wuxuu ahaa erayga" (Yooxanaa 1,1) looma isticmaalo magac sax ah. Erayga macnihiisu waa in Logos ay ahayd rabbaani - in Logos ay la mid ahayd isku dabiiciga ah ilaahay - hal uun, hal dabeecad. Waa khalad in la qaato in odhaahda "Logos wuxuu ahaa Ilaah" macnaheedu waa Logos wuxuu ahaa Ilaah kaligiis. Markaan eegno aragtidan, muujintaani kama hor-istaagayso Masiixa inuu u duceeyo Aabaha. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira Masiixa oo leh aabbe, mana jiro wax la isku raacsan yahay marka Masiixu uu aabe u duceeyo.
Qodobka labaad ee u baahan in la caddeeyo ayaa ah in Logosku uu noqday hilib (Yooxanaa 1,14). Qoraalkani wuxuu sheegayaa in Logos of God dhab ahaantii uu noqday bini-aadam - bini aadam ahaan, xadidan aadamiga, oo leh astaamaheeda iyo xaddidadiisa oo lagu garto dadka. Wuxuu lahaa dhammaan baahiyaha la raacaya dabeecadda aadanaha. Wuxuu u baahnaa cunno inuu ku sii noolaado, wuxuu lahaa baahiyo xagga ruuxiga ah iyo shucuureed, oo ay kujirto baahida loo qabo inuu cilaaqaadka Eebbe la yeesho salaadda. Baahidan ayaa si cad u qeexi doonta waxyaabaha soo socda.
Qodobka saddexaad ee u baahan in la caddeeyo ayaa ah dembigiisa. Tukashadu ma aha oo keliya dembilayaasha; xitaa qof aan dembi lahayn wuu karaa oo waa inuu Ilaah ku ammaano oo caawimaad raadsadaa. Bini aadamka, oo xaddidan ayaa waajib ku ah inuu Ilaah baryo, waa inuu lahaadaa xidhiidh lala yeesho Ilaah. Ciise Masiix, oo ah bini-aadamka, waxay ahayd inuu u duceeyo Ilaaha aan xad lahayn.
Tani waxay kor u qaadaysaa baahida loo qabo in la saxo khaladka afraad ee lagu sameeyay isla isla qodobka: maleeynta ah in loo baahan yahay in la tukado waa caddeyn in qofka tukanaya uusan ka badnayn aadanaha. Malo awaalkani wuxuu galay maskaxda dad badan fikir qalloocan oo salaadda laga soo qaaday - aragtida ah in bini'aadamka bini'aadamka uu yahay aasaaska salaadda. Muuqaalkani ma aha mid ka yimid Kitaabka Quduuska ah ama wax kasta oo Ilaah muujiyey. Aadam waa inuu tukan lahaa xitaa hadduusan dembaabin. Dembila'aantiisu maan ka yeeli lahayn salaaddiisa aan loo baahnayn. Masiixu wuu tukaday inkasta oo uu ahaa nin kaamil ah.
Iyadoo la tixraacayo waxyaabaha kor ku xusan ee maskaxda lagu hayo, su'aasha waa laga jawaabi karaa. Masiixu wuxuu ahaa Ilaah, laakiin isagu ma uusan ahayn aabbaha (ama Ruuxa Quduuska ah); wuu u duceeyay aabihiis. Masiixu sidoo kale wuxuu ahaa bini aadam - xadidan, macno ahaan xadidan aadamiga; wuxuu ku tukaday aabihii. Masiixu sidoo kale wuxuu ahaa Adamka cusub - tusaale ninkii kaamil ahaa oo ay ahayd inuu ahaado Aadan; wuxuu ahaa mid xidhiidh joogto ah la leh Ilaah. Masiixu wuu ka batay aadanaha - salaadduna ma beddeleyso xaaladdan; wuxuu ku tukaday sida wiilkii Ilaah oo noqday nin. Aaminaada ah in salaaduhu ku habooneyn ama aan loo baahnayn qof aan ka badnayn bini-aadamku kama soo muuqdo waxyiga Ilaah.